Kuonekwa uye kuva pamisika isina kuroorwa - nekunongedzera kamwe chete nenguva?
Iye uye maitiro ake pamisika
Ndinopfuurira sei zvakanaka?
Nhamba ye singles yakakwirira nhasi kupfuura kare. Chimwe chinokonzera kushungurudzika kwakashata shure, imwe yacho zvichida zvakanyanya kudaidzwa. Vakawanda variwo vasina kungwarira vasina kuroora kana kungova nenguva yakaoma kusangana nemumwe munhu. Zvinyorwa zvisinganyanyi kuwanda zviri kuedza nzira yemazuva ano yekukurukura neIndaneti. Kufambidzana neshamwari paIndaneti kunowanikwa kupfuura kare.
Flirt rimwe chete uye zvino
Pakutanga kutsvaga kwe "chikamu chechipiri" chave chakaoma zvikuru uye muupenyu chaihwo kazhinji chave chakavharirwa kunzvimbo yebasa kana kuti sedenderedzwa yevamwe shamwari, nokuda kweInternet, kune mikana yakawanda nhasi. Kunyangwe munhu akazarura, asi wechidiki ane hunyengeri ave atowana yake-yakanyanya kuchengetwa - Dulcinea.
Nokuti vatengi 55 + uye kuzvidzora pane zvose kuti Shy kana vakabatikana vanhu vakadai sevatariri, kuzvicheka-basa, izvo kutora shoma nguva kana kuda kubuda, achivimbisa mikana mitsva akavhurwa nekuvongwa paIndaneti kufambidzana mabasa. Ndezvipi zvinotyisa 60-ane makore anotaura nemukadzi ari muimba yekhofi nhasi? Kuvonga kuInternet, kunyange zvakasununguka zvinobvira. mukadzi Long asisina kumirira kuti zvakanyorwa, asi anogona pacharo zvive danho.
Muhupenyu chaihwo, mikana yokuti mukoti, somuenzaniso, anosangana uye anoda vadzidzisi vakadzidza, asi mutengesi asingakanganisi ane tsika dzakafanana, zvese zvakanaka sezero. Indaneti inoita kuti zviitike!
Saka rwakaoma kutsvaka zvakarurama naye pasina Internet inoshandiswawo kuva nyore zviri, zvinosuruvarisa kuti kutyaira nhasi Single Profiles uye inotsikwa mwoyo nokutendeseka kutsvaka anosarudza.
Vamwe varume vanowanzovhiringidza nzvimbo dzekufambidzana ne mail mail order uye vanofunga kuti vanongoda "kuraira" mukadzi. Mhuri dzine zvigaro nezvinodiwa zvinotarisirwa neusiku humwe chete, hukama hwepabonde uye kusavimbika zviri kuwedzera. Kubva nhasi nanhasi munhu wose ane unhu hweInternet, huwandu hwenhoroondo huri kunyura, vamwe vakadzi vanotambura vasina kutaura vanoti. Kunyange kutengesana kwepabonde nemurume mumwe chete, iyo inofanira kubhadhara kushandiswa kwemashumiro, urongwa huri kunyura uye nhamba yevaya vanyoresa vasingazivikanwi vasina mufananidzo, yakasimuka massively.
Kuverengera kuzhinji uye mapurogiramu anofadza pamwe chete nemapurogiramu akakomba ane zvinyorwa zvinowanzoita sekuti: "Handitsvaki chinhu. Ndinongotarisa-tarisa "zvinongova zvisingabatsiri. Kunze kweizvozvo, pasinei nekuwa kwemazinga uye akawanda fakes, nhamba yevatauri uye kusvika pakuziva vanhu vazhinji vakasiyana zvichida yakakwirira kuno. Munhu akatarisa akatarisa kazhinji anotarisa neminwe pano.
Kushivirira, asi zvinogona kutora nguva pamwe neshamwari dzekufambidzana!
Vatsva vanowanzoputirwa netsamba uye peji dzinoshanyira. Vakaroorana vanogona kungozviwana pachavo mumakiromita ane zviuru nezvikamu zvishoma zvekukwanisa hukama husingaperi, izvi zvinogona kunge zvakakurumbira kune mutemo.
A zvakaoma zera boka dzinomirira 36- kuna 45 makore Singles, kwete chete muupenyu chaihwo huri. Asi zvinokwanisika dzomuzana kazhinji revatema mumhuri kuvimbana uye paakavapa kana kwete asi vakagadzirira yechipiri kumativi.
Chii chaunofanira kuita kana shamwari yakanakisisa yava rudo?
Kuti uwane tsvakurudzo yakajeka iwe unofanira kunge wakajeka pamusoro pezvaunofunga uye zvido zvako. Zvisinei, munhu anofanira kutarisira kuti aonekwe nevanhu vasati vapedzisa nyaya yavo yekare. Nokukurumidza zvikuru mumwe anova asingazivi "stopgaper".
Misika imwe chete paInternet
Uyezve, mumwe anofanirwa kugadzirirwa kuti anofungidzirwa kuti Adonis pazuva rokutanga nemufananidzo ari pamufananidzo wake haana kufanana.
Kunyange zvakadaro, pasinei nekusaziva, munhu anofanira kugara achibata mumwe wacho nekuremekedza uye kuremekedza.
Anonyengedzwa zvikuru kunyanya mukure uye muzera. Uyezve, varume vane matambudziko kubvuma vhudzi ravo rinopera. Vakadzi varo vanofarira kubiridzira nekiki dzavo. Izvo saka zvinowanzoitika kuti haisi chokwadi, kazhinji kakatove nemifananidzo yeC10 yemakore yakashandurwa.
Kushungurudzika pazuva rekutanga ndiko kusingagoneki.
Upenyu haisi konti yekukumbira, haisi chaiye kana paIndaneti. Kana munhu anoziva ichi uye anotora mukana zvikuru unyanzvi hwokukurukurirana, chinjanai uye nokuzivana kana nhamba anosarudza vari pamusika wemari wayo pangave, chinhu zvinobvira mufaro uye yakawanda wokuzvidzora ruzivo chinhu munzira.
Zvichida iwe unofanirwa kunge uine mwoyo murefu.
Ndezvematongerwo enyika - Sei kusarudza imwe ...
Chii chinyorwa ... Mabhuku kuverenga mabhuku
Renovate - kugadzirisa imba yekare
Kuroorana - Izvi ndizvo zvinoitwa nemhemberero yemuchato
Idioms - Iva nebhodhi pamberi pepamusoro wako
Kusviba muhupenyu hwezuva nezuva taboo?
Nzira yekupendeza unicorn
Sauna - Kwaani musasa unoshanyira usina kukodzera